भरतपुरमा करिब ५०० स्वावको स्वाव परीक्षण सुरु – Saurahaonline.com
भरतपुरमा करिब ५०० स्वावको स्वाव परीक्षण सुरु
भरतपुर : चितवनको भरतपुर कोभिड १९ परीक्षण प्रयोगशालामा स्वाव परीक्षण सुरु गरिएको छ ।सोमवार विहान साँढे ६ बजेदेखि परीक्षण सुरु गरिएको प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. नीतु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
भरतपुरमा नेपाल प्रहरी, ट्राफिक, सशस्त्र,थुनुवा, वैँकका कर्मचारीहरुमा समेत कोभिड १९ पुष्टी भएपछि गरिएको कन्टयाक्ट ट्रेसिङका आधारमा संकलित ५४ स्वाव सहित विभिन्न ठाउँहरुबाट आएका करिव ५०० स्वावको परीक्षण सुरु गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो । भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै ५४ स्वाव कन्टयाक्ट टेसिङबाट र ४० वटा क्वारेनटाइनमा रहेकाहरुको स्वाव रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दिपक प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
हिजो आइतवार विशुद्ध निर्मलीकरणका लागि मात्रै प्रयोगशाला वन्द भएको भन्दै डा. अधिकारीले चितवनमा ट्राफिक कार्यालय, थुनुवा कक्ष, बैँक लगायत सिल तथा वन्द रहेकाले ट्रेसिङका आधारमा आएका स्वावको रिपोर्ट नआउदासम्म निरन्तर काम गर्ने बताउनुभयो । सामान्यतय वेलुकी ४ देखि ५ बजे नै प्रयोगशाला वन्द गरिने भएपनि आज सवै स्वावको रिपोर्ट नआउँदा सम्म निरन्तर परीक्षण जारी राख्ने अधिकारीले बताउनुभयो ।
७ जना प्राविधिक, २ जना कार्यालय सहयोगी रहेको प्रयोगशालाको मेशीनले एक पटक ९६ वटा स्याम्पल परीक्षण गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । एउटा स्वावको पूर्ण रिपोर्ट आउन ६ देखि ८ घण्टा लाग्ने छ । प्रयोगशालामा रहेको ३ वटा कोठामा २र २ जनाको दरले काम गरिने डा अधिकारीको भनाई छ ।
कसरी हुन्छ स्वाव परीक्षण ? के हो त प्रकृया ?
पहिलो कोठामा एलिकेट गरिन्छ । यो भनेको स्वावमा नाम र ठेगाना लेख्ने साथै विभिन्न ठाऊँबाट पठाएको नाम र भिटिएम छुट्याउने जसले अन्यत्र ठाउँमा पठाउनु परे वा रिर्पोट आएपछि उही नाम र ठेनागा भिडाउने । दोस्रो कोठामा एक्ट्राक्सन गर्ने । यो भनेको भाइरसमा सवै थोक हुने र त्यो वाट आरएनए मात्रै झिक्ने काम गरिन्छ । तेस्रो कोठमा आरएनमा कोभिड १९ को भारइको होकी होइन भनी छुट्याउन मद्दत गर्ने आवश्यक सामाग्री मिसाउने जसलाई मास्टर मिक्सरुम भनिन्छ र अन्त्यमा पिसिआर मेशीनमा राखेर परीक्षण गरी भाइरस पोजेटिभ नेगेटिभ छुट्याउने काम हुने डा अधिकारीले बताउनुभयो ।